Ɛyɛɛ Dɛn na Ɔbonsam Bae? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ɛyɛɛ dɛn na Ɔbonsam bae?
Onyankopɔn ammɔ obiara Ɔbonsam, na mmom ɔbɔfo na Onyankopɔn bɔɔ no, na akyiri yi ɔbɛyɛɛ ne ho Ɔbonsam anaa Satan. Yesu kaa biribi a ɛma yehu sɛ, bere bi na Ɔbonsam yɛ ɔbɔfo nokwafo a bɔne biara nni ne ho. Enti na Ɔbonsam yɛ Onyankopɔn ba ne ɔbɔfo a ɔteɛ.—Kenkan Yohane 8:44.
Ɛyɛɛ dɛn na ɔbɔfo pa tumi bɛyɛɛ Ɔbonsam?
Ɔbɔfo a ɔbɛyɛɛ Ɔbonsam no, ɔno ara na ɔtew atua tiaa Onyankopɔn na opiapiaa nnipa baanu a wodi kan no ma wɔbɛkaa ne ho. Enti ɔyɛɛ ne ho Satan a ɛkyerɛ “Ɔsɔretiafo.”—Kenkan Genesis 3:1-5; Adiyisɛm 12:9.
Onyankopɔn abɔde a wɔwɔ adwene nyinaa wɔ hokwan sɛ wɔpaw papa anaa bɔne. Saa ɔbɔfo a ɔyɛɛ ne ho Ɔbonsam no, na ɔno nso wɔ saa hokwan no, nanso na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma nnipa som no. Ná ɔpɛ anuonyam sen sɛ ɔbɛyɛ Onyankopɔn apɛde.—Kenkan Mateo 4:8, 9; Yakobo 1:13, 14.
Dɛn na Ɔbonsam akɔ so ayɛ de adaadaa nnipa? Ɛsɛ sɛ wusuro no anaa? Wubetumi anya saa nsɛmmisa no ho mmuae wɔ Bible mu.